ခွေးများအတွက်လှေကားထစ်များ၊ တင်ပါးဆုံများမှဤဝေဒနာများကိုရှောင်ပါ ခွေးကမ္ဘာ
Susana godoy | 05/10/2021 15:11 | ခွေးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
လှေခါးထစ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တွင်မရှိမဖြစ်အသုံးအဆောင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထပ်များ၊ အမြင့်အမျိုးမျိုးသို့တက်နိုင်ရန်၎င်းတို့သည်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့တိရစ္ဆာန်လောကကိုသွားရင်၊ ခွေးလှေကား သူတို့နောက်မှာကျန်ခဲ့လို့မရဘူး။ သူတို့သည်လည်းသူတို့၏ဘ ၀ ၏အစိတ်အပိုင်းများ၊ အထူးသဖြင့်အလွန်တိကျသောအချိန်များတွင်
ဒါကြောင့်ဘာတွေလဲဆိုတာမင်းသိဖို့လိုတယ် အသုံးအများဆုံးအားသာချက်များ သူတို့ကငါတို့အတွက်ခွေးလှေကားတွေ၊ ငါတို့ပေးမယ့်အသုံးအဆောင်တွေ၊ သူတို့ကိုအပြည့်အဝအကြံပြုတဲ့အခါမှာငါတို့ကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မယ်။ ဤအရာများနှင့်အခြားအရာများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန်များ၏သက်တောင့်သက်သာအကြောင်းကိုအမြဲစဉ်းစားသည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်တကယ်အရေးကြီးသောအရာဖြစ်သည်။ မင်းမှာရှိလား။
dibea လှေခါးဘေးမှ lionto ...
HXX ခွေးလှေခါး ...
Holtaz ခွေးချဉ်းကပ်လမ်း ...
Dake လှေခါးအတွက် ...
PetSafe ခေါက်လှေခါး ...
Pawhut Ladder အတွက်...
6 ခွေးချဉ်းကပ်လမ်း (သို့) လှေခါး? ဘယ် option ကပိုကောင်းလဲ။
အင်း၊ အဲဒါကအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့အဖြေတစ်ခုပါပဲ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့တိရစ္ဆာန်တွေအများကြီးကတစ်နေ့လုံးအိပ်ယာထဲကနေဆိုဖာပေါ်မှာရှိနေတာ၊ ရေရှည်မှာခုန်တာကသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်။ အချို့မျိုးစိတ်များသည်အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောကျောရိုးရှိသည်အချို့သောပြသနာများ (သို့) ရောဂါမျိုးစုံသို့ ဦး တည်သွားလိမ့်မည်။ အဆစ်များသည်လည်းခုန်မှုတိုင်းကိုခံစားနေရသည်။ ထို့ကြောင့်အကူအညီလိုအပ်ရန်အထူးသဖြင့်တိရစ္ဆာန်အသက်ကြီးလာသောအခါ၎င်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်အခုမင်းကမင်းရဲ့ဘ ၀ မှာရောမင်းရဲ့အမွေးပေါက်ခွေးတွေအတွက်ပါလိုအပ်တဲ့အခြေခံအသုံးအဆောင်တွေထဲကတစ်ခုဆိုတာမင်းသိတယ်။
ထိုနည်းတူ၎င်းသည်လည်းတစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည် အရိုးများကိုဂရုစိုက်ရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းများသူတို့သည်ဤမျှများပြားသောခုန်နှုန်းကိုခံစားနေရသောကြောင့်နောင်ပိုကျိုးလွယ်နိုင်ကြသည်။
ခွေးတွေမှာအရိုးစွဲနေတဲ့ဓလေ့တွေထဲကတစ်ခုကတော့ ကုတင်နဲ့ဆိုဖာနှစ်ခုစလုံးကိုတက်နိုင်ခဲ့တယ်မရ။ ငါတို့ရှိနေရင်သူတို့ပြေးလာလိမ့်မယ်၊ တခါတလေငါတို့မရှိရင်တောင်အဲဒီဒေသမှာသူတို့နေရာရှိတယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းလုပ်ရမယ့်အရာကပုံမှန်ဘဲ၊ ငါတို့ပြောခဲ့သလိုဘဲမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုနည်းမှန်လမ်းမှန်ပြဖို့လှေကားတစ်စင်းထားမယ်။ သူတို့ကတစ်နေ့ကနေနောက်တစ်နေ့ကိုသင်ယူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမှန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကနည်းနည်းစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့သင်ပေးလိမ့်မယ်။ သူတို့ကအကျွမ်းတဝင်ရှိတဲ့အခါသူတို့ကလှေခါးကိုသုံးလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တိရိစ္ဆာန်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်မြင်နေရသောနောက်ထပ်အလေ့အကျင့်တစ်ခုမှာကားထဲသို့ ၀ င်လာခြင်းဖြစ်သည်မရ။ သူတို့ကအရမ်းသွက်လက်တဲ့အခါသူတို့ကသတိမပြုမိဘဲနည်းနည်းချင်းခုန်တာကြောင့်သူတို့ရဲ့ထိခိုက်မှုကိုယူနိုင်တယ်။ ထို့ကြောင့်လှေကားများလည်းကစားလာသည်။ ငါတို့ကသူတို့နဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါသူတို့ကတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လုပ်ဖို့ပြီးပြည့်စုံတယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အားတင်းကျပ်ရန်မလိုဘဲမှန်ကန်သောခြေလှမ်းများကိုကူညီခြင်းဖြင့်ကူညီပေးသည်။ ထို့ပြင်အများစုသည်သန့်ရှင်းရလွယ်ကူသောကြောင့်ညစ်ပတ်လျှင်စိတ်မပူပါနဲ့။
သူတို့ကရေကူးကန်မှာရေကူးတာကြိုက်ရင်သူတို့နည်းနည်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်းနဲ့အပန်းဖြေနိုင်မယ်၊ ဒါကသူတို့အတွက်ရောငါတို့အတွက်ပါဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့။ ဒါပေမယ့်ရေချိုးပြီးတာနဲ့ထွက်ပေါက်ကနည်းနည်းရှုပ်ထွေးသွားနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့လှေကားထစ်တွေကိုကူညီတာနဲ့တူတာဘာမှမရှိဘူး။ သူတို့သည်သူတို့၏ခြေလှမ်းများကိုတိုစေလိမ့်မည် ထို့ပြင်သူတို့သည်တူညီသောအားထုတ်မှုကိုပြုလုပ်ရန်မလိုပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့အားလုံးသည်စဉ်းစားရန်အားသာချက်များဖြစ်သည်။
ခြေလှမ်းအရေအတွက် တစ်နေရာရာကိုအသွား၊ အပြန်ပေါ်တဲ့အခါငါတို့ကဇာတ်ကောင်ကိုနှစ်သိမ့်ပေးချင်တယ်။ ထို့ကြောင့်ခွေးလှေကားသည်အဆင့်များစွာရှိနိုင်သည်။ အချို့မှာခြေလှမ်းနှစ်လှမ်းသာရှိကောင်းရှိသော်လည်းအခြားများစွာကသုံးလေးဆင့်ထက်ပိုသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်အလွန်မြင့်မားရန်အရေးကြီးပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်နှစ်ဆင့်ကိုသာရွေးချယ်လျှင်၎င်းတို့သည်အတူရှိနေသည် နူးညံ့ပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသောပစ္စည်းများနှင့်ပြီးစီးသည်မရ။ သို့မှသာသင်ခုန်တိုင်းကိုကူပေးနိုင်သည်။
အဆင့်အမြင့် ငါတို့ကအဲဒါကိုပြောပြီးအဲဒါကိုငါတို့တစ်ခေါက်ပြန်ပြောတယ် အကောင်းဆုံးအချက်ကတော့သူတို့မှာအမြင့်အများကြီးမရှိဘူး ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်အဆင့်တွေရှိပါသေးတယ်။ အထူးသဖြင့်ခွေးငယ်များ (သို့) ဖျားနာတစ်မျိုးမျိုးရှိနေသောသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့်ခုန်ခြင်းကသင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်များစွာအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိစေဘဲ၎င်းတို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
အဆင့်အကျယ် အဆင့်များစွာ၏သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်းတူညီသောနည်းလမ်းများဖြင့်၎င်းတို့၏ကွဲပြားခြားနားသောအကျယ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နိုင်သည်။ နှစ်သိမ့်မှုကအကျယ်ဆုံးမှာရှိနေတယ်ဒါပေမယ့်အဲဒါကအမြဲတမ်းဒီလိုဖြစ်စရာမလိုပါဘူး၊ သူတို့ကအလတ်စားအရွယ်အစားနဲ့ဆိုတော့ငါတို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုသက်တောင့်သက်သာရွေ့လျားဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မယ်။
ဆိုင်းငံ့ထားသည်: ဒါဟာအမြဲတမ်းမူတည်လိမ့်မယ် လှေကားများ၏ပုံသဏ္န်မရ။ ထို့ကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အခြားတစ်ခုထက်ဆိုင်းငံ့ထားသောအရာတစ်ခုရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်တကယ်တမ်းသူတို့မှာအဆင့်များစွာရှိရင်အပြောင်းအလဲကိုသိပ်သတိထားမိမှာမဟုတ်ဘူး။ အကောင်းဆုံးအချက်မှာမတ်စောက်လွန်းခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည်။
၎င်းတို့သည်ခေါက်နိုင်လျှင် ငါတို့သည် ခေါက်ထားသောအရာများကိုရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်မှုမရ။ သူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အားသာချက်ကငါတို့အဲဒါတွေကိုသုံးမယ့်အခါမှသာသူတို့ကိုနေရာချနိုင်တယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူတို့ကနေရာသိပ်မယူဘဲငါတို့သူတို့ကိုဘယ်ထောင့်ဒါမှမဟုတ်ခုတင်အောက်မှာထားမယ်။ ဒါကြောင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကသူတို့ကိုအသုံးမပြုကြတဲ့အခါအချိန်မရွေးလမ်းပေါ်မရောက်နိုင်ပါဘူး။
ပစ္စည်း: သစ်သားသည်ဤအခြေအနေများတွင်အသုံးအများဆုံးပစ္စည်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုနည်းနည်းပိုသက်သာသွားအောင်လုပ်နိုင်တယ် mesh သို့မဟုတ် velvety အဖုံးများဖြင့်စီတန်းပါ၎င်းသည်၎င်း၏ထိတွေ့မှုကိုပိုမိုချောမွေ့စေသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ချော်လဲတဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့အမြဲအဖုံးကိုသင်သက်တောင့်သက်သာလျှော်နိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အခြားတစ်ဖက်မှာမင်းမှာပေါ့ပါးပြီးအညီအမျှခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ပလတ်စတစ်ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိတယ်။
ခြုံငုံ။ ပြောရလျှင်လှေကားအတက်နှင့်အဆင်းကိုမည်သည့်ခွေးအတွက်မဆိုအကြံပြုသည်။ ဒါပေမယ့်ခြွင်းချက်တွေအမြဲရှိနေတာတော့အမှန်ပါပဲ။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တိုတောင်းသောခြေထောက်များနှင့်ရှည်မျောမျောခန္ဓာကိုယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမျိုးစိတ်များအားလုံးသည်ဤဖြည့်စွက်စာကိုနေ့တိုင်းလိုလိမ့်မည်ဟုပြောနိုင်ပါသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ချို့ကကြိုက်တယ် dachshunds (သို့) dachshunds, bassets (သို့) corgi တို့ဟာတော်တော်လေးထိခိုက်လွယ်ပြီးဒါကတင်ပါးပြဿနာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။အရိုးနှင့်အဆစ်များ၊
တိုင်းရင်းသားတွေလည်းကြိုက်တာပေါ့ Labrador သို့မဟုတ်ဂျာမန်သိုးထိန်းသည်တင်ပါးဆုံရိုးကိုသာမကကျောရိုးမှလည်းအလားတူခံစားနိုင်သည်မရ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းခုန်သောအခါ၎င်းသည်ချုံ့။ ၎င်းသည်သင့်ထက်ပိုတင်လိမ့်မည်။ သူတို့ကအသက်ကြီးလေပိုဆိုးလေဘဲ ၄ လလောက်ထိခွေးပေါက်လေးတွေကအကူအညီလိုလိမ့်မယ်ဆိုတာအမှန်ပါပဲ။ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်ကောင်းသည်။
ခွေးချဉ်းကပ်လမ်း (သို့) လှေခါး? ဘယ် option ကပိုကောင်းလဲ။
၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်သင်၌အရည်အသွေးများစွာပေးရန်အမြဲလိုသည်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုဖာဖြစ်ဖြစ်၊ အိပ်ရာဖြစ်ဖြစ်၊ နေရာနှစ်ခုစလုံးအတွက်လုံလောက်တဲ့နေရာရှိသလား၊ အရပ်အမြင့်နဲ့အလေးချိန်ကိုချိန်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အခြားတစ်ဖက်မှာအရေးအကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုကကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လှေကားကမင်းဘက်မှာရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်သင့်ခွေးမှာဖျားနာခြင်း (သို့) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေရင်ချဉ်းကပ်လမ်းကအားမသန်နိုင်အောင်ပိုကောင်းပါတယ်။
ထိုနည်းတူ၎င်းသည်ခြေထောက်တိုခွေးဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ချဉ်းကပ်လမ်းသည်သင်၏အကောင်းဆုံးမဟာမိတ်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ငါတို့လမ်းပေါ်ဆင်းတဲ့အခါမင်းကန့်သတ်ချက်တချို့ကိုတက်နိုင်တယ်ဆိုတာငါတို့တွေ့ရင်လှေခါးကိုရွေးနိုင်တယ်။ မြင်တဲ့အတိုင်း၊ ငါတို့ရဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေအဲဒါတွေရှိရင်ငါတို့အမြဲစဉ်းစားရမယ်.
အမေဇုံ: ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ၊ အမေဇုံမှာမင်းလိုအပ်သမျှအရာအားလုံးအမြဲရှိနေတယ်၊ ​​ဒါဆိုရင်ဒီကိစ္စကနောက်ကျကျန်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဤအကြောင်းကြောင့်ခွေးများအတွက်လှေကားများအကြားကွဲပြားခြားနားသောအချောထည်များနှင့်ကွဲပြားသောအရာများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေသည်။ ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းချော်လဲမနေဘဲအမှတ်ပေးဇယားတွေနဲ့ပါ။
Kiwoko: Kiwoko စတိုးသည်ခွေးများအတွက်လှေကားများနှင့်အခြားအဆင့်များပါ ၀ င်သည်၊ ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာကူညီနိုင်ရန်စီမံထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်တန်းစီနေပါကပိုမိုသက်တောင့်သက်သာ၊ အကာအကွယ်နှင့်နူးညံ့မှုကိုရရှိလိမ့်မည်။
.ရာဝတီခွေးများအတွက်အကောင်းဆုံးလှေကားများရွေးချယ်ရာတွင်ကူညီပေးသောပလတ်စတစ် (သို့) စီတန်းထားသောပလတ်စတစ်များနှင့်စီတန်းထားသောကွဲပြားခြားနားသောအရာများကိုလည်းဤစတိုးဆိုင်တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ စျေးအသက်သာဆုံးရွေးချယ်မှုများကိုလည်းတွေ့ရသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » ခွေးလှေခါး